Tag: mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta | Martech Zone
Kpido: ihe ọmụma gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Wednesday, October 28, 2020 Wenezdee, Machị 24, 2021 Tom Siani
Taa usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ọrụ dị mkpa ọ ga-arụ na ndụ anyị. Ọtụtụ ijeri mmadụ gburugburu ụwa na-eji ha ekwurita okwu, kporie ndụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịnweta akụkọ, chọọ ngwaahịa / ọrụ, ụlọ ahịa, wdg. Netwọk mmekọrịta ga-emetụta usoro ị na-eme kwa ụbọchị n'ụzọ dị mkpa. Can nwere ike ịgakwuru ndị nwere mmasị yiri nke gị ma wulite ọbụbụenyi na-adịgide adịgide ọbụlagodi na-enweghị aha. I nwere ike imere ọtụtụ ndi ozo ebere
Etu ị ga-esi gbakọọ nlọghachi na ntinye ego gị na Social Media
Monday, August 27, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Dika ndi na ere ahia na ebe mgbasa ozi nke ndi mmadu tozuru, anyi na achoputa otutu ihe banyere uzo na uzo nke itinye ego na mgbasa ozi. Ga - ahụ na m na - akatọkarị atụmanya nke ndị na - ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta - mana nke a apụtaghị na m na-akatọ usoro mgbasa ozi. Ana m echekwa ọtụtụ oge na mbọ site na isoro ndị ọgbọ na-ekerịta amamihe ma na-ekwukwa okwu n'etiti ụdị ndị dị n'ịntanetị. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na oge m nọrọ na mgbasa ozi mmekọrịta
Sunday, July 15, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa agbanweela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke mgbasa ozi ha iji kwado omume ndị ahịa na usoro teknụzụ. Ihe omuma a, otu Social Media si gbanwee Mgbasa Mgbasa Ozi site na Mgbasa Ozi MDG, na-enye ufodu ihe ndi ozo na-acho ma na-emetuta mgbanwe na mgbasa ozi mgbasa ozi. Mgbe mgbasa ozi mgbasa ozi nke mbụ rutere ebe ahụ, ndị na-ere ahịa jiri ya mee ka ha na ndị na-ege ha ntị nwee njikọ. Agbanyeghị, ndị na - ere ahịa taa agbanweela ọtụtụ
Anyị kekọtara ọnụ ọgụgụ gbasara uto nke ọrụ ndị ahịa site na iji mgbasa ozi mmekọrịta, ozi infographic a na-ewepụtakwu ya, na-enye mkpịsị ugodi isii dị iche iche maka ụlọ ọrụ gị iji tinye aka iji hụ na ihe ịga nke ọma. Ọrụ ndị ahịa Lousy nwere ike imebi ahịa gị, yabụ ọ dị mkpa maka ndị ahịa iji nyochaa mmetụta na oge nzaghachi site na mgbasa ozi mmekọrịta. N'otu nyocha JD Power karịrị ndị 6 na-azụ ahịa n'ịntanetị, 23,000% nke ndị zaghachiri kwuru na ha kpọtụrụ ụlọ ọrụ site na mgbasa ozi mmekọrịta